Dad badan oo lagu laayay gobolka Texas ee dalka Mareykanka & Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
Dad badan oo lagu laayay gobolka Texas ee dalka Mareykanka & Wararkii ugu dambeeyay
Texas (Halqaran.com) – Ugu yaraan labaatan qof ayaa dhimatay 26 kalena weey dhaawacmeen kaddib markii nin caddaan ah oo hubeysan uu rasaas ku asqeeyay dadweyne dukaameysananay oo ku sugnaa magaalada El Paso ee gobolka Texas ee dalka Maraykanka.
Ninkan ayaa weerarka ku qaaday mid ka mid ah dukaamada sida aadka ah ay dadku wax uga iibsadaan ee ay leedahay shirkadda Wall Mart oo ay xilligaa ka dukaameysanayeen dad fara badan. Ninka la tuhunsanayahay in uu toogashada geystay ayaa da’diisa lagu qiyaasay labaatameeyo sano.
Magaca ninkan ayay warbaahintu ku sheegtay Patrick Crusius iyada oo la sheegay in si iskiis ah uu isugu soo dhiibay ciidamada kaddib markii uu falkaasi geystay.
Guddoomiyaha gobolka Texas f Greg Abbott oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu aad uga argagaxay waxa halkaa ka dhacay.
”Texas waxay maanta muraga la qeybsanaysaa shacabka El Paso. Maalin si caadi ah ay dadka usoo dukaamaysan lahaayeen ayaa isu bedeshay mid ka mid ah maalmaha uu dhiigga ugu badan ku daatay taariikhda Texas, Waxaa la laayay dad maanta noolaan . Waxaa weerarkaasi ku dhintay labaatan qof, halka tobanaan kalena ay ku dhaawacmeen. Ka gobol ahaan, waxaan ka midaysannahay taageeridda dhibbanayaasha iyo qoysaskooda”, ayuu yiri Abbot.
Dhanka kale Madaxweyne Trump oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa twitter-ka ayaa falka weerarkaasi ku tilmaamay ”ficil fuleynimo ah”
”Waan ogahay in aan metelo qofkastaa oo ku sugan dalkan, waxaana maanta si xooggan u dhaleyceynayaa ficilkaan nacaybka ku saleysan. Ma jirto sababo ama marmarsiyo loo sameyn karo dil looo geystay dad aan waxba galabsan”, ayuu yiri Trump
Si kastaba, toogashada ka dhacday El Pasa ayaa ah tii siddeedaad ee ugu dhimashada badneyd ee soo marta taariikhda Maraykanka, waxaana durbadiiba bilowday dood ku aaddan xakamaynta hubka ee dalkaasi.
Xafiiska Halqaran.com, Minnesota
dad lagu laayay